﻿﻿ Deg Deg ah-Sheikh Shaakir Oo Mudda kadib hadal aan looga Baran sheegay kadib Markii Ciidamada Galmudug ay gaareen…… | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Deg Deg ah-Sheikh Shaakir Oo Mudda kadib hadal aan looga Baran sheegay kadib Markii Ciidamada Galmudug ay gaareen……
Janaraal Maxamad Nuur Galaal ayaa sheegay in labada madaxweyne ee Galmudug iyo Ahlu-Sunna Waljamaaca ay mabda’ahaan isku raaceen in la mideeyo labada maamul isla markaana uu madaxweyne u noqdo Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Janaraal ,
Galaal oo waraysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in sidoo kale mabda’ahaan la isku raacay xarumaha hay’adaha dawladda la kala qaado, tusaale ahaan in xukuummaddu ku shaqayso magaalada caasimada ah ee Dhuusamareeb, halka baarlamankuna ku shaqeynayo magaalada Cadaado, Garsoorkana loo wareejiyo magaalada Caabudwaaq.
Janaraal Galaal waxa kale oo uu sheegay in Madaxweyne Xaaf oo uu la socdo Sheekh Maxamad Shaakir uu kormeer ku mari doono Dhuusamareeb illaa Matabaan.
Sheekh Maxamad Shaakir-na uu booqan doono magaalada Cadaado.
Janaraal Galaal oo ka hadlayay ciidamo Galmudug ah oo saaka qabsaday deegaanka Mareergur, waxa uu sheegay inaanay ciidankaasi ka amar qaadan Madaxweyne Xaaf, isla markaana ay yihiin haraadigii waxa uu ugu yeeray Damjadiid.
buy canibus Lyrical law Alshabaab oo caawa soo galay deegaano Hoos yimaada Cadaado
get link Sawiro-Xaaf iyo wasiirka qorsheynta Soomaliya oo kormeeray Halka laga dhisayo dakada Hobyo.
buy prednisone online for dogs Sawiro-Madax badan oo gaartay Hobyo…